इतिहास ‘मेटाउँदै’ महिला क्रिकेट | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / इतिहास ‘मेटाउँदै’ महिला क्रिकेट
इतिहास ‘मेटाउँदै’ महिला क्रिकेट
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार March 6, 2019	0 45 Views
बाके । आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका लागि भएको प्रदेश छनोट प्रतियोगितामा बा“केको महिला क्रिकेट टीम ‘पुच्छर’मा प¥यो। ५ नम्बर प्रदेशको १२ जिल्लामध्ये तीनवटा जिल्लाले मात्रै प्रतियोगिामा महिला क्रिकेट टीम उतारेका थिए।
दाङ, रुपन्देही र बाके गरी तीन जिल्लाले छनोट प्रतियोगिता खेल्दा बा“के ‘तेस्रो’ भयो।बाकेबाट नै महिला क्रिकेट जन्मिएको र लामो समयसम्म बाकेका सातजना महिला खेलाडीले नेपाली क्रिकेटमा ‘राज’ गरेको इतिहास अब इतिहासमै सीमित भइसकेको यसले देखायो। त्यति मात्रै होइन, अब प्रदेशकै टिममा बा“केबाट कोही पनि नपर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिदिएको छ।प्रदेश छनोटमा बा“केबाट चारजना अनुभवी खेलाडी मैदानमा उत्रिएका थिए। नेपालको पहिलो पुस् ताकी खेलाडीद्वय ममता थापा र तृष्णासिंह तथा राष्ट्रिय खेलेका गीता गोसाई र सामना पुन टिममा थिए। अरु क्रिकेटप्रति आकर्षित भएका जुनियर थिए। प्रतियोगिता हार्नु भन्दा पनि बढी त १४ जनाको टिम पु¥याउन नै धौधौ भएकोले ‘बेइज्जत’ भएको छ।महिला क्रिकेट जन्माएको जिल्लामात्रै होइन, बाके सरकारी तलव खाने क्रिकेटका प्रशिक्षक भएको जिल्ला पनि हो। एकजना सिनियर खेलाडीले भनिन्, ‘सरकारी प्रशिक्षकले त एक दिन पनि प्रशिक्षण गराउदैनन्। प्रतियोगिता भएको बेलामा होस् या अरु बेला नै।’
राखेपले प्रशिक्षकलाई खाली तलव खुवाएर मात्रै पाल्ने हो कि काम पनि लगाउने हो ? बा“केको क्रिकेटमा टड्कारो रुपमा यो प्रश्न उब्जिएको छ।प्रदेश प्रतियोगिताका लागि १४ जना खेलाडी छान्नुपर्ने थियो। जिल्लाभरीबाट १४ जना नै आइपुगे। त्यसमध्ये एकजना कोहलपुरकी खेलाडी फालिइन्। नेरी थापा आउने गरी भनेर अरु सबैलाई टिममा राखियो। नाम भन्न डराउने एकजना खेलाडी भन्छिन्– ‘टिममा परेका कोही बिरामी थिए। कोही भने राम्ररी नियम थाहा नभएका थिए। प्रतिस् पर्धी नभएकाले टिममा परेका थिए। यस् ताहरुलाई समेटेर कहा“बाट बा“केले प्रतियोगिता जित्छ ?’यसले के देखाउ“छ भने अहिले बा“केमा महिला क्रिकेटको ‘टिम’ नै छैन।
नियमित प्रशिक्षण नहुने, क्रिकेटप्रति छात्राहरु आकर्षित भए पनि खेल्ने ठाउ“ नहुने, बेला–बेलामा प्रतियोगिता नभएकाले कुनै बेलाको ‘हस् ती’ बा“के यतिबेला कमजोर भएको छ।बा“के जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले नेरी थापा पनि नआएको र खेलाडी नै धेरै नभएर राम्ररी छनोट गरेर प्रशिक्षण दिन नसक्दा प्रदेश छनोट प्रतियोगितामा बा“केको लज्जास् पद हार भएको स् वीकारे।अहिले टीम नै नरहेको स् वीकार्दै अध्यक्ष थापाले निकट भविष्यमै नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुराबाट पा“चवटा टिम बनाई आन्तरिक प्रतिस् पर्धा गराएर राम्रो महिला टीम बनाउने उद्घोष गरे। ‘नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट ५०÷५० जना खेलाडी छानिसकेका छौं। बैशाख तेस्रो सातामा खजुराबाट केही खेलाडी छान्छौं र नेरी, ममताहरुलाई उनीहरुको टिम क्याप्टेन बनाएर आपसमा प्रतिस् पर्धा गराई राम्रो टिम तयार गर्छौं’– अध्यक्ष थापाले आशाको किरण देखाए। मैदानको खोजी हु“दैनेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदानको अभाव रहेको छ। अहिलेसम्म मंगलप्रसाद स् कूलको मैदानमा खेलेर नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जन्मिए।
स्कूलको मैदानले मात्रै पुग्ने स् िथति छैन। नया“ मैदान नबनाई भएको छैन। यो कुरा बा“के जिल्ला क्रिकेट संघका पदाधिकारीलाई मात्रै होइन, नेपालगञ्जका मेयरदेखि बा“के निवासी शहरी विकास मन्त्री मो. इस् ितयाक राईसम्मलाई खड्केको छ।मन्त्री राईले तत्काल जग्गा खोजेर दिए आफूले करोडौं रुपैया“ खन्याइदिने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइरहेका छन्। मेयर धवलशमशेर राणा पनि जग्गा खोज्न व्यस् त छन्। तर भन्ने बित्तिकै जग्गा कहा“ मिल्थ्यो र ? नेपालगञ्ज–६ फुल्टेक्रामा हिन्दु र मुस् िलम समुदायले ‘प्रयोग’ गरिरहेको दश विगाह जमिन छ। त्यसमा क्रिकेट मैदान बनाउन संघका अध्यक्ष थापा, मेयर राणादेखि मन्त्री राईसम्म लागेका छन्। तर यो त धार्मिक भावनासग जोडिएको कुरा भयो।
उपमहानगरपालिकाले जोडबल गरेर आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैन। मेयर राणाले भने– ‘हामीले दुबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर त्यहा क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अघि सारेका छौं। दुबै पक्षसमक्ष हाम्रो फाइल पुगिसकेको छ। केही दिनमै हुने वा नहुने कुरा फाइनल हुन्छ।’ मेयर राणाले त्यहा नभए फुल्टेक्राको आर्मी ब्यारेक पछाडिको खाली जग्गालाई पनि हेरिरहेको जानकारी दिए। हिरमिनियामा ठूलो पार्क बन्दैछ। त्यसको बीचमा पनि खेल मैदान गराउने नगरपालिकाले योजना गरेको छ। नेपालगञ्जकी उपमेयर उमा थापा मगरले उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा क्रिकेट मैदान परेको बताइन्। उनले महिला क्रिकेट जन्माएको ठाउबाट महिला क्रिकेट उत्पादन नहुनु दुःखद भएको भन्दै यसो हुनुमा मैदान पनि एक पाटो हो भनिन्।सरकारले कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाइरहे पनि त्यतिले मात्रै मैदानको समस् या समाधान नहुने भन्दै नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदान बनाउन जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ।
मंगलबारदेखि छात्रा क्रिकेट नेपालगञ्जमा मंगलबारदेखि अन्तर मावि उपमेयर कप छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। बा“के जिल्ला फूटबल संघले नेपालगञ्जका १४ वटा विद्यालयका छात्रालाई प्रतियोगितामा सामेल गराएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा १४ वटा विद्यालयका छात्राहरुलाई एक हप्ता तालिम दिएको संघले त्यसपछि प्रतियोगिता गराउन थालेको हो।संघले नेपालगञ्जको मंगलप्रसाद मावि, वाटरपार्क र मुक्तिपुरको ज्वालाफिल्डमा तालिम दिएको थियो। राष्ट्रिय टीममा प्रतिनिधित्व गरिसकेका ममता थापा, तृष्णा सिंह, गीता गोसाई र सामना पुनले छात्राहरुलाई तालिम दिएका थिए। त्यही तालिम लिएका छात्राले उपमेयर कपमा प्रतिस् पर्धा गर्दैछन्।
संघले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर चालिस हजार राशीको उपमेयर कप छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता गराउन थालेको जानकारी दियो।२१ देखि २८ गतेसम्म चल्ने अन्तर मावि उपमेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा सरस् वती, वेष्टजोन, मंगलप्रसाद, सिद्धार्थ, युनाइटेड, आदर्श, होलिल्याण्ड, होप इन्टरनेशनल, शान्ति विद्या निकेतन, भेरी इमि, नेपालगञ्ज मोडेल एकेडेमी, एबीसी र युद्ध संस् कृति माविले प्रतिस् पर्धा गर्ने पक्का भइसकेको संघका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले जानकारी दिए।
Previous: नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संवेदनशीलताको खाँचो
Next: प्रदेशस्तरीय मणिमुकुन्द कप भलिवल शुरु